दाङमा विभिन्न दुर्घटनामा परि २ को मृत्यु, ४ घाइते (नामसहित) – जलजला अनलाइन
Posted on March 16, 2019 Author Jaljala Online	Comments Off on दाङमा विभिन्न दुर्घटनामा परि २ को मृत्यु, ४ घाइते (नामसहित)
चैत २, दाङ । दाङमा भएका विभिन्न दुर्घटनामा परि दुईजनाको मृत्यु भएको छ भने चारजना घाइते भएका छन् ।
पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तरगत राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ५ पहरुवामा पश्चिम तर्फ आइरहेको रा ३ प ८४१७ नम्वरको मोटरसाईकलले एकै दिशातर्फ आउँदै गरेको साईकललाई ठक्कर दिदां भएको दुर्घटनामा मोटरसाईकल चालकको मृत्यु भएको छ।
दुर्घटनाका घाइते मोटरसाईकल चालक लमही नगरपालिका वडा नं. ५ निवासी ४४ बर्षीय पिताम्वर गोराथोकीको उपचारका क्रममा लमहीमा राति ११ बजेतिर मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
साइकल चालक लमही ४ निवासी ३० बर्षीय रामअवतार चौधरीको अवस्था भने सामान्य रहेको छ । उक्त दुर्घटना बेलुकी ९ बजेतिर भएको हो ।
त्यस्तै पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तरगत लमही नगरपालिका वडा नं. ३ बनगाँउ चोकमा शुक्रवार साँझ ८ बजेतिर पूर्ववाट पश्चिम तर्फ जाँदै गरेको रा २ प ६०२६ नम्वरको मोटरसाईकलले पैदलयात्रीलाई ठक्कर दिदा घाइते भएका लमही ३ बनगाँउ निवासी ६० बर्षीय जयमंगल चौधरीको मृत्यु भएको छ ।
घाइते चौधरीलाई लमहीमा प्रारम्भिक उपचार पछि थप उपचारका लागि रुपन्देही लगिएको थियो। त्यहाँको क्रिमशन अस्पतालमा चौधरीको गएराति पौने १ बजेतिर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जानकारी दिएको छ ।
उक्त दुर्घटनामा परि चौधरीकी पत्नि ५० बर्षीया छुनिया चौधरी र मोटरसाईकल चालक लमही ५ कोलही निवासी ३२ बर्षीय राजकुमार चौधरीपनि घाइते भएका छन् । तर उनीहरु उपचार पछि घर आइसकेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
घोराही लमही सडक खण्डमा बस दुर्घटना हुँदा दुईजना घाइते भएका छन् । घाइते हुनेमा बसका चालक दाङको धर्ना निवासी ४६ बर्षीय शेरबहादुर केसी, सोही ठाउँकै अर्का चालक पोषण गिरी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जानकारी दिएको छ ।
दाङको घोराही–लमही सडक खण्ड अन्तरगत मसोटको मोडमा शुक्रबार राति साढे ११ बजेतिर रा.१ ज. ६७४ नम्बरको बस दुर्घटना हुँदा उनीहरु घाइते भएका हुन ।
दाङ जिल्ला प्रहरी प्रमुख एवं एसपी बेलबहादुर पाण्डेले घाइतेको अवस्था सामान्य रहेको जानकारी दिए ।
‘मदिराले मातेको तालमा बिना उदेश्य बस चलाएका रहेछन्,’ एसपी पाण्डेले भने ‘ड्रिङ्क एण्ड ड्राइभकै कारण बस दुर्घटना भएको हो।’ मदिरा सेवन गरि सवारी चलाउने चालकलाई कारवाही गर्ने एसपी पाण्डेले जानकारी दिए । नारायण खड्का/सेतोपाटीबाट साभार
नेपाली यात्रुले आकाशमै यसरी गरे जहाजभित्रै बबाल, दिल्लीमा आकस्मिक अवतरण (नालीबेलीसहित)
Posted on March 31, 2018 Author Jaljala Online
चैत १७, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको एयरबस ३२० जहाज शुक्रबार बिहान दुबईबाट काठमाडौंका लागि उड्यो। चालक दलका आठ र १ सय ३७ यात्रु बोकेर उडेको जहाज दुई घण्टापछि अकस्मात गन्तव्य परिवर्तन गरी काठमाडौंको सट्टा भारतको नयाँदिल्लीमा आकस्मिक अवतरण गर्नुप-यो । यो खबर सुशील भट्टराईले आजको नागरिक दैनिकमा लेखेका छन् । काठमाडौं नआई के कारण […]
‘भीआईपी जुवा अखडा’मा प्रहरी छापा: ४ तलाबाट हाम्फाल्दा दुईको मृत्यु, एक महिलासहित २३ पक्राउ
Posted on October 6, 2018 Author Jaljala Online
असोज २०, काठमाडौं । मुलपानी स्थित एक ‘भीआईपी जुवा अखडमा शुक्रबार राति प्रहरीले छापा मारेको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट डिएसपी होविन्द्र बोगटीको कमाण्डमा सादा पोशाकमा खटिएको प्रहरी टोलीले जुवा खालमा छापा हान्दै गरेको अवस्थामा ४ तला माथिबाट हाम्फाल्ने दुई जुवाडेको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा सरोज घले र सानु लाल तामाङ छन् […]
स्वरूप बिग्रिएको नेपालको झन्डा राखिएकोबारे गम्भीर खुलासा, अब के गर्छ सरकार ?
Posted on May 17, 2018 Author Jaljala Online
जेठ ३, काठमाडौं । भारतीय प्रधानमत्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणका वेला जानकी मन्दिर परिसरको मञ्चमा स्वरूप बिग्रेको नेपालको राष्ट्रिय झन्डा भारतीय दूतावासले राखेको खुलेको छ । भारतीय सुरक्षाकर्मीले मञ्चको दायाँ–बायाँ दुई देशका झन्डा राखेका थिए । आजको नयाँ पत्रिकामा यो समाचार छापिएको छ । जानकी मन्दिर प्रांगणमा रामायण सर्किटको शिलान्यास कार्यक्रमका लागि बनाइएको मञ्चको दक्षिणपट्टि […]